Adapazarı Pendik Chitima Chekuita Zvinowedzera; Nhamba dzendege dziri paAdapazarı-İzmit-Pendik mutsetse, panosangana ndege dze8 zuva nezuva, yakawedzera kubvira nhasi. Iyo yekuwirirana 10 pakati peAdapazarı nePendik kubvira nhasi [More ...]
Bosphorus Express Bhazi Rudungwe uye Tiketi Mitengo; Pakati pe Ankara neSakarya, iyo Bosphorus Express yatanga ndege kuti isangane nezvinodiwa zvekufambisa pazviteshi zvepakati apo YHTs isingamire. Bosphorus Express mune edu nhau [More ...]
TÜDEMSAŞ bogies yakashandiswa mune ngoro dzeSwitzerland Wascosa; Ngoro dzekutakura dzinogadzirwa mukudyidzana neTÜDEMSAŞ-Sekete Sete yakaunzwa kukambani yeSwitzerland. 25 inogadzirwa neveruzhinji-pachedu kubatana [More ...]
Cengiz Kuvaka-Duygu Injiniya Yokubatana yakakunda iyo nyowani yeElin Pelin Vakarel Railway Line, inozivikanwa seyakaomesesa chirongwa muBulgaria. Bulgaria yazvino 70 ichaitwa mugore [More ...]
Turkey Nokutsigirwa nokuda Development pamusoro Malaysia Airlines; Minister Turhan, Gurukota rinoona nezvekutakurwa kweMalaysia, Anthony Loke Siew Fook, pamwe nevamiriri, [More ...]
Gadzira magetsi emagetsi eAmerican Tesla akaunza yaro nyowani nyowani Cybertruck pickup rori vhiki rapfuura. Maitiro emota, girazi rakatsemurwa panguva yekuratidzira yaive chirongwa chezuva rekutanga. zvose [More ...]
Minister weEthiopiya Yezvekutakura vakashanyira AKH Railway Site; MuEthiopiya, inoshanda pa1,7 bhiriyoni remadhora Awash Waldia-Hara Gabaya Railway Project, iyo yakaitwa nekambani yeTurkey Yapı Merkezi Holding [More ...]
Thales akakunda thenda yekuwedzera kweSydney Underground kuguta uye kumaodzanyemba, ndokusaina chibvumirano cheCentral Control uye Communications. Kuwedzeredzwa kweSydney Metro's Central Control uye Kutaurirana Systems [More ...]
Catenary Kuchengeta Ngoro dzekutengesa - Mercedes neRenault
Catenary Maintenance Tool Yokutengesa
33 Chidimbu Chikutengeswa Kana Kutengesa NaSRAY